नेपाल राष्ट्र बैंकले मालसामान आयातमा लाग्ने विदेशी मुद्राको सीमा बढ्यो, अब कति ? - Digital Khabar
नेपाल राष्ट्र बैंकले मालसामान आयातमा लाग्ने विदेशी मुद्राको सीमा बढ्यो, अब कति ?
By डिजिटल खबर Last updated Mar 19, 2021
नेपाल राष्ट्र बैंकले मालसामान आयात गर्दा लाग्ने परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सीमा बढाएको छ । अबदेखि आयातित वस्तुको भुक्तानीका लागि व्यवसायीले एकपटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर १ लाख वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको कारोबार गर्न पाउने भएका छन् ।
व्यवसायीलाई आयातमा समस्या भएको गुनासो आएपछि सीमा बढाउन माग भएकाले ५० हजार अमेरिकी डलरबाट बढाएर १ लाखसम्म तोकिएको डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए ।
‘वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ अन्तर्गत रहेर परिवर्तन गर्न पत्र पठाएको थियो । यसपछि आवश्यकता महसूस गरेर सीमा बढाएका हौं,’ उनले भने ।
छाया सेन्टरमा कमेडी च्याम्पियन सिजन–२ को पहिलो भाग
चुनौतीको सामना गर्दै म्यानमार